पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्ग मुनि सुनको जलहरि राखिने – Puleso
पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्ग मुनि सुनको जलहरि राखिने
By:puleso Published Date: मङ्लबार, जेष्ठ २२, २०७५
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत संसारभरका वैदिक सनातनी हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मूल मन्दिरको शिवलिङ्ग मुनिको जलहरि सुनको बनाइने भएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष कार्य सम्पादन समितिले सुनको जलहरि राख्ने निर्णय गरी तयारी थालेको छ । शिवलिङ्ग मुनि हाल चाँदीको जलहरि राखिएको छ ।
आगामी महाशिवरात्रिसम्म सुनको जलहरि हालिसक्ने गरी काम अघि बढाइएको कोषका सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकालले राससलाई जानकारी दिए ।
सुनको जलहरि राख्न एक अर्ब खर्च लाग्ने कोषको प्रारम्भिक अनुमान छ । यसका लागि हाल कोषसँग ६० करोड रूपैयाँ बजेट छ । बाँकी बजेट भक्तजनसँग दानका लागि आह्वान गरिने कोषका कोषाध्यक्ष डा मिलनकुमार थापाले बताए ।
सुनको जलहरि राख्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आउन थालेपछि कोषले सार्वजनिकरुपमा विश्वभर फैलिएका भक्तजनसँग दान गर्न अनुरोध गर्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५र२०७६ का लागि प्रस्ताव गरेको बजेटमा पनि पशुपतिमा सुनको जलहरि राख्न ५० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार उप्रेतीले बताए ।
मूल मन्दिरमा सुनको जलहरि राख्नका लागि निर्माण समितिको पनि गठन गरिएको छ । पशुपतिनाथका मूल पुजारी रावल गणेश भट्टको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा कोषाध्यक्ष डा मिलनकुमार थापा, सञ्चालक परिषद् सदस्यद्वय रमेशराज शिवाकोटी र राजु खत्री, कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार उप्रेती, कोषको संस्कृति महाशाखा प्रमुख निर्देशक भरत मरासिनी सदस्य छन् ।
समितिको सदस्य सचिवमा कोषका प्रमुख लेखा अधिकृत प्रेमहरि ढुंगाना रहेका प्रशासकीय अधिकृत गौरीशंकर पराजुलीले बताए ।
जलहरि राख्नका लागि ९० किलो सुन लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल रहेको चाँदीको जलहरिमा १८५ किलो राखिएकाले त्यति नै सुन राख्नुपर्ने मत पनि छ । जलहरि बाक्लो बनाउनुपर्ने भएकाले चाँदी जति नै सुन राख्नुपर्ने विषयमा पनि आजै बसेको समिति बैठकमा छलफल भएको छ ।
बैठकले सात दिनभित्र जलहरि निर्माण कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले जानकारी दिए । तीन दिनभित्र प्राविधिकलाई अध्ययन गराई जलहरि बनाउन लाग्ने सुनको परिमाण सार्वजनिक गर्ने कोषले जनाएको छ । सुनको जलहरि राख्नका लागि भक्तजनले सुन नै पनि दान गर्न सक्नेछन् । अन्नपूर्ण पोष्ट
मेलम्चीको पानी अनिश्चित, सरकारले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं – सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणको जिम्मा लिएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी (सीएमसी)सँग ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालेको छ । ठेकेदार विस्तृतमा...
डा. केसीका मागबारे एकजुट हुन आह्वान
काठमाडौँ -अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको छ । शुक्रबार एक विस्तृतमा...